Travel To The Black Forest Germany | Save A Train
musha > Travel Europe > Travel To The Black Forest Germany
Nokuti avo ukasazviziva kare, Dema Sango inzvimbo yakakura ine masango kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweGerman. More zvakananga, zvakanyorwa iri rehurumende Baden-Württemberg uye anopindura chikamu chinokosha nayo.
Uyezve, nharaunda iri riri pamuganhu Furanzi uye Siwizarendi, saka zviri nyore kubva kune nyika pamwe.
Munyaya ino, tichataura zvakawanda pamusoro nei inokosha kushanya. Chikurukuru, Tichava kukuudza sei kusvika Black Forest muGermany nechitima.
Runako nharaunda yacho hunhu, asi vamwe yevedza nemisha. Kana mamiriro chikamu, nzvimbo iri, tsime, akazara masango. Kuti chikamu hazvidi tsananguro. zvisinei, pane zvakawanda zvinodiwa!
The Black Forest, kana Schwarzwald sezvo zviri kunzi muna German, ane nzvimbo vakawanda yakanaka Panoramic maonero. It zvakare akazara dzinokatyamadza rwizi pamipata jeka, naka twi yevazhinji zvikomo kuti iwe unogona kuwana pano.
Mukuwedzera, pane zvakawanda dzokugara anogona kuva kufarira vanhu vazhinji. Unogona kuwana mhuri wakagadzikana dzokugara, vaviri dzakachengeteka, uye anotyisa nharaunda zvizhinji zvarisingazivi vanhu.
Chii chimwe, uchawana yose naka uye fairytale-kufanana gore rose! Ndicho chokwadi nokuti anotarisa zvinoorora kana zviri jeka, naya-naya, uye kana pane chando. Unogona kuzviona zvakajeka mu mifananidzo yakawanda yacho.
Offenburg kuna Konstanz Zvitima
Stuttgart kuna Offenburg Zvitima
Leipzig kuna Dresde Zvitima
MuNuremberg kuna Stuttgart Zvitima
How Kusvika Black Forest nechitima
Kuzadzisa Black Forest nechitima chinhu kuti iwe unogona kuita zvakawanda. Ndizvo kunyanya nokuda nzvimbo munzvimbo uye kuti vadzidzise kufamba kuburikidza Germany zvakazonaka.
zvisinei, kuti hazvina zvose. Unogona kusvika dzokugara dzakawanda munharaunda kubva chero chikamu Europe. Ndicho chokwadi kunyanya maguta makuru munyika akafanana France, Siwizarendi, Ositiriya, Bherujiyamu, Itari, uye zvakawanda.
Kana Germany, chitima kufamba anoitwa nyore seimwe kambani - Deutsche rautateiden unoshanda nayo. Zvakasiyana ICE Zvitima, EuroCity, CityNight, Intercity, uye TGV mitsetse anogona kutora kuti vakawanda munzvimbo dziri mudunhu. Unogona kuchovha chitima kuna Karlsruhe, Baden-Baden, Freiburg, uye Offenburg. nezvitima izvi ndibve zvose zvikuru kumaguta German, saka kushanyira Black Forest nechitima achava mhepo.
Chero ukasarudza kuita, hauzopindi zvakaipa, nekuti kushanyira Black Forest inogona mashiripiti ruzivo. Tiri kutaura izvi zvikurukuru nokuti unogona kushandisa yevedza chitima uye kuyambuka yose nharaunda. Unozonzwa zvinhu yakaisvonaka iyo Black Forest ine kupa. The Black Forest yevedza mutsetse anoshanda nenzira Offenburg-Konstanz.
Offenburg kuna Freiburg Zvitima
Stuttgart kuna Freiburg Zvitima
Leipzig kuna Freiburg Zvitima
MuNuremberg kuna Freiburg Zvitima
Shanyira Black Forest nechitima Pose Uchida!
Sezvaunogona kuona, runako nharaunda uye zvivanakire chitima kufamba kuti rwendo urwu chiitiko chinoshamisa. We zvikuru zano kuti kushanyira kupfuura mashiripiti nzvimbo Germany kanenge kamwe muupenyu hwako! zvisinei, kuti rwendo kunofanira yakareba zvakakwana kuti uone zvinhu kuti Black Forest ine kupa!
Kana ukasarudza kuita isu zvavanokwanisa ichi, inzwa wakasununguka Contact Save A Train. Tinogona kukubatsira kushanyira Black Forest nechitima uye kuwana chisingakanganwiki zvechokwadi ruzivo.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fblack-forest-by-train%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / kuti ru kuti / ja kana / mukati uye mimwe mitauro.
#blackforest #blackforestgermany nezvitima chitima mazano Train Travel chitima rwendo
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Chitima Kufamba Hungary, Rovedza Kufamba Italia, Travel Europe
10 Zvisina kujairika Zvinokwezva Munyika Yose
pamusoro 3 Zvakanakisa Chitima Rwendo Nzvimbo Kubva London
10 Inoshamisa Inomira MuEurope
10 Akanyanya Akanaka Skyscrapers Munyika Yose
10 Nzvimbo Dzakawanda Dzakanaka MuNyika